China Aluminium CNC yekugaya zvikamu Mugadziri uye mutengesi Walley
1.Tiri fekitori ine zvinopfuura 20 makore cnc machine ruzivo.
2.Approx 95% zvechigadzirwa chedu zviri zvakananga kunze kwenyika kuenda kuUSA / Canada / Australia / UK / France / Germany / Bulgaria / Poland / Italia / Netherlands… Hunhu hwakasimbiswa.
3. Zvizhinji zvedu michina zvinotengwa kubva kuUSA neJapan senge nemuchina HAAS (3-axis, 4-asxis cnc milling michina), Hama, TSUGAMI (6-axis switch machine), Miyano zvichingodaro. saka isu tinokwanisa kugadzira yakakwira chaiyo zvikamu zvinoenderana neyako shiviriro zvido.
4.Tinogona nyatso kudzora pamusoro pedza senge kupukuta / bhurasho / jecha nenyunje, zvakajairwa anodize / kuomesa anodize, nhema oxide, yakanamirwa pamifananidzo (Chrome / Nickel / zinc / goridhe / sirivheri…)
5. Kubva pane yedu yakanaka mhando, sevhisi yakanaka uye yakanaka kodhi rekodhi isu takasarudzwa seKA vatengesi naAlibaba. Pazasi pekubatanidza ndevamwe vedu nhoroondo yekutengesa paAlibaba, unogona kutarisa.
Voerly michina inogadzira inokurumidza kugadzira, uye tariro yekuve mudiwa wako mune ramangwana.
Yedu Machining Kubatsira
CNC yekugaya inotibvumidza kuti tikurumidze uye nemazvo muchina wako zvikamu kubva kuchitoro zvinhu zvaunosarudza, mune ipurasitiki kana simbi. 2D uye maumbirwo e3D anogadzirwa zviri nyore kune yakakwira mwero wekururamisa uye kupera kwemvura. Zvese zveCNC zvekugaya muchina mashandiro akaiswa kunze kwekushandisa uchishandisa Delcam Powermill software. Chishandiso uye basa rekuseta basa kubatsira kuona kukurumidza kutendeuka uye kunyatso. Takashandisa michina yeTaiQun neHURCO kubva kuTaiwan pamwe nemamwe emuno maChinese mabhurani emapurojekiti ekushomeka kunonetsa.
Machining edu kugona
Kugadziriswa kwechidimbu +/- 0.01mm ， + / - 0.005mm
Dhizaini fomati JPEG, PDF, AI, DWG, DXF, IGS, STEP
Zvinhu zviripo Simbi: kabhoni simbi, alloy simbi, isina simbi simbi, Aluminium, Brass etc.
Mapurasitiki: ABS, PMMA, PTFE, PE, POM, PA, UHMW, nezvimwe.
Surface kurapwa Simbi: kukuya, kupukuta, Kupenda, bicolor-kudhinda, Electroplating, Screen kudhinda, Wiredrawing, Laser kuveza, anodizing etc.
Mapurasitiki: kukuya, kupukuta, kupenda, bicolor-kudhinda Electroplating, Screen kudhinda, Laser kuveza etc.
Zvimiro Kugadzira Vhoriyamu Prototype kune Kugadzira
Nemazvo CNC machine Turning, Kufinha, Drilling, Countersinking, Thread azvikuya, Threading zvemukati / zvekunze, machine etc.
Isu tinogara tichiteedzera kupa vatengi neyakanakisa zvigadzirwa zvinoenderana nemitengo inonzwisisika. Isu tinoshandisa chigadzirwa chemhando yepamusoro kuburikidza nekubatanidzwa kwe "kudzivirira" uye "kuongorora", uye nekupa yakachengeteka uye yakavimbika mhando yekudzora tekinoroji yekugadzira. CNC chaiyo machining yakaperekedzwa kupedzisa chako chekuisa.
Dzidzo uye kurovedzwa ndiyo yakanakisa nzira yekuona kuburitswa kwematarenda. Voerly anogara achiitisa seminari yemhando yepamusoro uye misangano yemhando yepamusoro yekuvandudza hunyanzvi hwevashandi vehunhu, kugona hunyanzvi hwazvino, uye kusangana nezvinodiwa zvehunyanzvi zvezvinzvimbo zvakasiyana.
Medical, Photoelectric, Auto musika, kutaurirana, Aerospace uye Kudzivirirwa, Aerospace, Chengetedzo, Mashini
Pashure: Aluminium CNC Turning Zvikamu
Cnc Aluminium Kugaya Zvikamu
Cnc hwokugaya hwakabvira Aluminium
Cnc Kugaya Aluminium Chikamu
Cnc Kugaya Anodizing Aluminium
Tsika Cnc Kugaya Chikamu Aluminium Machine